Iphume ekugcineni imiphumela yokhetho yaseGoli – LIVE Express
Emva kokulinda isikhathi eside igcine iphume ngemizuzu yokugcina imiphumela yokhetho edolobheni elikhulu kunawo wonke iNingizimu Afrika, i-Johannesburg, e-Gauteng.
NgoMqibelo inhlangano eyengamele ukhetho kuleli, i-Independent Electoral Commission (IEC) imemezele imiphumela yonke yokhetho lohulumeni basekhaya kanti ekuqaleni komcimbi i-IEC imemezele ukuthi izophuma yonke imiphumela ngaphandle kweyase-Johannesburg.
Ngokwemiphumela ye-IEC ephume ngoMgqibelo, i-ANC ithole amavoti angama-1 121 948 (44.55%), i-DA yathola amavoti angama-966 192 (38.37%), kanti i-EFF yona ithole amavoti angama-279 195 (11.09%).
Njengoba lingekho iqembu eliwine ngamalengiso noma ngaphezu kwa-50% kuzophoqeleka ukuthi amaqembu azophatha kulo masipala aphathe ngokubambisana.
i-DA kanye ne-EFF sebekubeke kwacaca ukuthi angeke baze basebenzisane ne-ANC kanti bathi bazimisele ngokusebenzisana namanye amaqembu aphikisayo.